Uphononongo lweFBS | Ikhuseleke kangakanani i-FBS? Iimpawu kunye neentlawulo ezichaziweyo
Uphononongo lwe-FBS-Ikhuseleke kangakanani i-FBS? Izixhobo zokurhweba kunye neentlawulo ezichazwe
Ukuba ujonge i-broker ekwi-intanethi ukurhweba i-forex, izitokhwe, izinto zorhwebo, ii-cryptocurrencies, kunye nokunye-inokuba kufanelekile ukuba uthathele ingqalelo i-FBS. Lo mthengisi udumileyo weCFD ubonelela ngezona ntlawulo zibalaseleyo zokurhweba kule ndawo yentengiso- ecaleni kweentlobo ezininzi zeakhawunti kunye namaqonga onokukhetha kuwo.
Kolu phononongo lwe-FBS, sigubungela yonke into ekhoyo malunga neqonga lokurhweba kwi-Intanethi ukuze ukwazi ukuvavanya ukuba ngaba umthengisi ukulungele na.
I-FBS - i-Broker eNgcono kakhulu kunye ne-0% yeKhomishini kunye ne-ZERO Spread Accounts
I-forex yorhwebo, izitokhwe, i-indices, i-crypto, kunye nokunye
Iindidi ze-0% ikhomishini kunye ne-ZERO yokusasazwa kweeakhawunti ukukhetha kuzo
Ukulawulwa kakhulu kunye nodumo oluqinileyo
Yintoni iFBS Broker?
Yasekwa ngo-2009, i-FBS liqonga lokurhweba kwi-intanethi elisekelwe kwiikhontrakthi-zokwahlukana (CFDs). Oku kuthetha ukuba uya kukwazi ukurhweba ngeentlobo ngeentlobo ze-asethi kunye ne-asethi kwaye ube nokukwazi ukuhamba ixesha elide okanye elifutshane kwindawo yentengiso oyikhethileyo.
Ngapha koko, nge-avareji yokuya kuthi ga kwi-1:3000 ekunikezelweni kwayo, i-FBS iya kubhenela kwabo banqwenela ukurhweba ngokungaphezulu kunoko bakhoyo kwiakhawunti yabo. Ngokubhekiselele kwiimarike ezixhaswayo, uya kufumana inani elikhulu le-asethi ye-CFD kuzo zonke izitokhwe, i-indices, amandla, isinyithi, i-crypto, kunye ne-forex.
I-FBS ibhenela kwinani elibanzi labarhwebi, hayi kancinci kuba ibonelela ngeentlobo ezininzi zeakhawunti onokuthi ukhethe kuzo. Oku kubandakanya i-akhawunti ye-commission-free kunye nokusabalalisa okuqala kwi-pip ye-1, efanelekileyo kubahwebi bemihla ngemihla. Kungenjalo, kwabo bafuna ukurhweba imithamo emikhulu, i-akhawunti ye-ECN kwi-FBS inikezela -i-1 ipip isasazeka ecaleni kwekhomishini yokhuphiswano ye-6 yeedola.
Xa kufikwa kukhuseleko, i-FBS inegama elihle kweli candelo. Ayisiyiyo kuphela i-broker enikezela ngeenkonzo zokurhweba ngaphezulu kweminyaka eyi-12, kodwa ilayisenisi yi-IFSC, FSCA, CySEC, kunye ne-ASIC. Ngaphaya koko, i-FBS ithe yatsala ngaphezulu kwe-17 lezigidi zabarhwebi kwiqonga layo kwiingingqi ezingaphezu kwe-150. Lilonke, uphononongo lwethu lwe-FBS lufumanise ukuba umthengisi unikezela ngamava okurhweba aqinileyo kunye nexabiso eliphantsi eliya kufanela abatyali-mali bazo zonke iimilo kunye nobukhulu.
Iimpawu zeFBS kunye nokungalunganga
Ngezantsi sichaza iziphumo eziphambili zophononongo lwethu lweFBS.
Inani elikhulu leemarike ezibonelelwayo
Ukunyuka ukuya kuthi ga kwi-1: 3000
Iintlobo zeeakhawunti ezininzi onokukhetha kuzo
Izicwangciso zasimahla zekhomishini kunye neqanda
Ukusebenza ukusukela ngo-2009
Kopisha izixhobo zokurhweba
I-MT4 kunye ne-MT5 ixhaswa
Inikwe ilayisenisi yiCySEC, IFSC, FSCA kunye neASIC
Ayifumaneki kuwo onke amazwe - kuquka i-US kunye neCanada
Vula iAkhawunti ngoku
Isilumkiso somngcipheko: I-75.3% yeeakhawunti zokuthengisa zilahlekelwa yimali xa kuthengiswa ᏟᖴᎠs nalo mboneleli. Ii-ᏟᖴᎠ's zizixhobo ezintsonkothileyo kwaye ziza nomngcipheko omkhulu wokuphulukana nemali ngokukhawuleza ngenxa yempembelelo.
IiMarike ezixhaswa yi-FBS
Ukuqala uphononongo lwethu lwe-FBS, siya kuphonononga inani kunye neentlobo zeentengiso ezibonelelwa ngumthengisi.
Masiqhawule iklasi nganye yee-asethi.
Ukuqala ngesebe le-forex, i-FBS ibonelela ngeembini zeemali ezininzi. Oku kubandakanya zonke izibini ezinkulu nezincinci - njenge-GBP/USD, GBP/EUR, kunye ne-USD/JPY.
Uya kufumana ukhetho oluhle lweemali zangaphandle ezithengiswa ngokulula. Oku kuquka izibini eziqulathe izloty yasePoland, iyuan yamaTshayina, inyani yaseBrazil, kunye ne-Czech koruna.
Ukuba ujonge ukurhweba ngezinto ezithengiswayo ukusuka kubutofotofo bekhaya lakho, i-FBS ikugqumile. Oku kuquka iintsimbi ezixabisekileyo ezifana negolide kunye nesilivere - zombini zinokuthengiswa ngokuchasene nedola yaseMelika. Ukongeza, uphononongo lwethu lweFBS lufumanise ukuba umthengisi ubonelela ngeemarike zamandla ezininzi.
I-FBS ibonelela ngee-CFD ezininzi zesitokhwe - ukuze ukwazi ukurhweba iinkampani zakho ozithandayo kunye nezixhobo zokuthengisa ezimfutshane. Uninzi lwezitokhwe ezixhasiweyo zidweliswe kwi-NYSE, NASDAQ, kunye neLondon Stock Exchange.
Ukuba ujonge ukuvezwa okubanzi kwiimarike zesitokhwe zehlabathi, ungaqwalasela izalathisi zorhwebo kwi-FBS. Iimarike zolwelo zigubungela i-Dow Jones 30, NASDAQ 100, S&P 500, kunye ne-FTSE 100. Ungathengisa kwakhona izalathisi ezilandelela iimarike ezivela eJapan, eFransi, eHong Kong, nangaphezulu.
Okokugqibela, uphononongo lwethu lwe-FBS lukwafumene icandelo lorhwebo lwe-cryptocurrency olubanzi. Oku kugubungela ezinye zezona zinto zidumileyo ze-crypto asethi kule ndawo yentengiso-ezinje ngeBitcoin, Ripple, NEO, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, EOS, kunye nokunye.
Kwakhona, njengoko i-FBS igxile kwizixhobo ze-CFD, unokurhweba zonke iimarike ze-cryptocurrency ezixhaswayo kunye ne-avareji. Ngaphezu koko, ukuba ukholelwa ukuba ithokheni yedijithali inokuthi yehle ngexabiso, ungayifutshane ngokungena kwimarike kunye nomyalelo wokuthengisa.
Imirhumo yoRhwebo yeFBS kunye neeAkhawunti
Imirhumo oyihlawulayo ukurhweba kwi-FBS iya kuchazwa luhlobo lweakhawunti okhetha ukuyivula. Ngale nto engqondweni, amacandelo angezantsi anika isishwankathelo sento nganye i-akhawunti enikezela ngayo kunye neentlawulo zayo ezifanelekileyo kunye neekomishini.
Ukuba ungumqali ngokupheleleyo kwihlabathi lezorhwebo, unokujonga iakhawunti yeCent. Oku kukuvumela ukuba uqalise ngediphozithi encinci ye-1 yeedola kwaye ufumane ukufikelela kwiimarike zasimahla zekhomishini.
Ngokulandelayo, uya kuhlawula inqanaba lokungena kwinqanaba lokusasazeka kwe-1 ipip. Olu hlobo lwe-akhawunti lukwavumela i-avareji ukuya kuthi ga kwi-1:1000. Nangona kunjalo, njengoko sifaka iinkcukacha ezithe vetshe kamva, oku kuxhomekeke kwilizwe ohlala kulo, ubume bomthengi (urhwebo okanye ubuchwephesha), kunye ne-asethi ethile ethengiswayo.
Iakhawunti yeMicro kwi-FBS ikwabonelela ngokurhweba ngaphandle kwekhomishini, nangona kunjalo, ukusasazeka kuqale kwi-3 pips. Nangona kunjalo, ngelixa ukusasazeka kwiakhawunti yeCent idada, isicwangciso seMicro silungisiwe.
Umlinganiselo ophezulu wokulinganisa okhoyo kolu hlobo lwe-akhawunti yi-1: 3000 kwaye idiphozithi encinci yokuqala yi-$ 5 kuphela.
Okulandelayo yi-akhawunti esemgangathweni, efuna idiphozithi encinci ye-100 yeedola. Kwakhona, olu hlobo lwe-akhawunti lukuvumela ukuba ungene uthenge kwaye uthengise izikhundla kwi-0% ikhomishini.
Ngokufana neakhawunti yeMicro, ukusasazeka kubonelelwa ngesiseko esidadayo. Kodwa, ukusasazeka kwi-akhawunti esemgangathweni kukhuphisana ngakumbi, njengoko ziqala kwi-0.5 pips.
Ukuba uyakuvuyela ukuhlangabezana nediphozithi yokuqala ephantsi ye-500 yeedola, unokucinga ngokuvula i-akhawunti ye-Zero Spread kwi-FBS. Njengoko igama libonisa, oku kuya kukuvumela ukuba uthengise izixhobo zemali ukusuka kwi-pips encinci ye-0 - kwaye ukusasazeka kuyadada.
Emva koko, kuya kufuneka uhlawule ikhomishini ye-20 yeedola kwiqashiso ngalinye - elihlawuliswayo xa ungena kwaye uphuma kwindawo. Esona sixa-mali siphezulu esinikwe kolu hlobo lwe-akhawunti yi-1:3000.
Ii-akhawunti ze-ECN zifunwa kakhulu ngabarhwebi abaqeqeshiweyo, njengoko zikunika ukufikelela kwamanye amaxabiso angcono kwimarike. Oku kunjalo ngakumbi xa uqikelele kwi-forex, njengoko uya kuthengisa ngokuthe ngqo nabanye abathathi-nxaxheba beemarike.
Kwi-FBS, ii-akhawunti ze-ECN zifuna idiphozithi encinci ye-1,000 yeedola. Oku kuyaphawuleka ngokwenene, njengoko abathengisi be-ECN bahlala befuna ubuncinci bamanani amahlanu. I-FBS ayinikeli kuphela ukusasazeka okudadayo okuqala kwi--1 pips, kodwa olu hlobo lweakhawunti luza neekhomishini ezikhuphisanayo ze-6 yeedola kwisilayidi ngasinye.
Ukuba ufuna ukurhweba ngamabini amathokheni edijithali afana ne-BTC / USD kunye ne-ETH / USD, kuya kufuneka uvule i-akhawunti ye-Crypto kwi-FBS. Iindaba ezimnandi apha zezokuba eyona mfuno isezantsi yedipozithi ibekwe kwi-1 yeedola. Oku kuvumela abarhwebi benqanaba lokungena ukuba bazame nge-cryptocurrency CFDs ngaphandle kokufuna umngcipheko weemali ezinkulu.
Olu hlobo lweakhawunti kwi-FBS luza nokusasazeka okudadayo okuqala kwi-pip eyi-1 ecaleni kwekhomishini yokhuphiswano ye-0.05% kwisilayidi ngasinye. Ngenxa yoqikelelo oluphezulu kunye noguquguquko lwendalo ye-cryptocurrencies, olona ncedo lunikezelwayo kule akhawunti ye-FBS yi-1:5.
IiAkhawunti zeDemo zeFBS
Esikuthandayo nge-FBS kukuba umthengisi uyakuvumela ukuba uvule iakhawunti yedemo. Ngapha koko, ungarhweba ngemali yephepha usebenzisa iakhawunti ye-FBS ocinga ukuyivula. Oku kuya kukunika uphononongo olupheleleyo lwentaka-iliso lokuba ingaba iakhawunti ethile ikulungele na okanye hayi.
Thelekisa iiAkhawunti zeFBS
Ukuze ufumane isishwankathelo esipheleleyo sohlobo ngalunye lwe-akhawunti ye-FBS, khangela le theyibhile ingezantsi.
The lekisa I-CENT MICRO UMGANGATHO ZERO SASAZA ECN
Idiphozithi yokuqala kwi $ 1 kwi $ 5 kwi $ 100 kwi $ 500 kwi $ 1000 kwi $ 1
sasaza Ukusasazeka okudadayo ukusuka kwipip eyi-1 Ukusasazeka okusisigxina ukusuka kwi-3 pips Ukusasazeka okudadayo ukusuka kwipip eyi-0,5 Fixed ukusasazeka 0 pip Ukusasazeka okudadayo ukusuka kwi -1 pip
Ukusasazeka okudadayo ukusuka kwipip eyi-1
Commission $0 $0 $0 ukusuka kwi-$ 20 / iqashiso $6
I-0.05% yokuvula kunye ne-0.05% yezithuba zokuvala
oluxhathisayo ukuya kwi-1: 1000 ukuya kwi-1: 3000 ukuya kwi-1: 3000 ukuya kwi-1: 3000 ukuya kwi-1: 500 ukuya kwi-1: 5
Ubuninzi bezikhundla ezivulekileyo kunye nemiyalelo elindileyo 200 200 200 200 Akukho mida yorhwebo 200
Umthamo weodolo ukusuka kwi-0,01 ukuya kwi-1 000 yamaqashiso
(nge 0,01 inyathelo) ukusuka kwi-0,01 ukuya kwi-500 amaqashiso
(nge 0,01 inyathelo) ukusuka kwi-0,1 ukuya kwi-500 amaqashiso
(nge 0,1 inyathelo)
ukusuka kwi-0,01 ukuya kwi-500 amaqashiso
(nge 0,01 inyathelo)
enze Market ukusuka 0,3 sec, STP ukusuka 0,3 sec, STP ukusuka 0,3 sec, STP ukusuka 0,3 sec, STP ECN
ukusuka 0,3 sec, STP
Qaphela, ukusasazeka okudweliswe ngasentla kuhambelana nelona zinga lokhuphiswano olukhoyo. Ukuba ukwiakhawunti edadayo, imali oyihlawulayo iya kuxhomekeka kwizinto ezahlukeneyo ezifana ne-asethi kunye neemeko zemarike zangoku.
Ngaphezulu kwee-commissions kunye nokusabalalisa, kuya kufuneka kwakhona uhlolisise ukuba ngaba uya kufuna ukuhlawula nayiphi na imali yediphozithi. Oku kungenxa yokuba iindlela ezithile zokuhlawula azihlawulelwa, ngelixa ezinye zitsala intlawulo. Umzekelo, ungayixhasa ngemali iakhawunti yakho ngeVisa simahla, ngelixa iStickpay iya kukubiza i-2.5% kunye ne-0.30 yeedola.
Amaqonga okuRhweba eFBS
I-FBS ikunika inani leenketho xa kuziwa ekukhetheni iqonga lokurhweba. Oku kubandakanya zombini iMT4 kunye neMT5, onokufikelela kuyo kwi-Intanethi okanye ngeWindows kunye nesoftware yedesktop yeMacOS. Ukongeza, unokufikelela kwiakhawunti yakho ye-FBS ngeMT4/5 app mobile. Xa kufikwa kwisantya sokwenza umyalelo, kulapho i-FBS igqame khona ngokwenene.
Enyanisweni, iqonga libanga ukuba i-95% yee-odolo zenziwa kwimizuzwana nje ye-0.4. Ngaphaya koko, onke amaqonga axhaswayo eza kunye nemarike, umda, ilahleko yokuyeka, kunye nokulandela ii-odolo zelahleko yokuyeka. Okona kubaluleke kakhulu, akukho zicatshulwa kwiiseva ze-FBS. Oku kungenxa yokuba umthengisi wenza iiodolo nge-STP kunye ne-NDD technologies.
Ukuba ufunda kumacandelo ethu kwiintlobo ezininzi zeeakhawunti ezibonelelwa ngumthengisi, uya kuqaphela ukuba i-FBS ibonelela ngeyona mida iphezulu yokufumana amandla kule ndawo yentengiso. Umzekelo, ezinye iiakhawunti ziza kunye nemida yokunyuka ukuya kuthi ga kwi-1: 3000-ithetha ukuba ungaphinda-phinda i-stake yakho nge-3,000.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukukhumbula ukuba i-FBS ilawulwa ngamanye amaqumrhu ezezimali ahloniphekileyo kweli shishini - kubandakanywa ukuthanda kwe-ASIC kunye ne-CySEC.
Ngenxa yoko, isixa sobuxhakaxhaka oya kuba nokufikelela kuso siya kuxhomekeka ekugqibeleni kwilizwe ohlala kulo.
Umzekelo, ukuba ungummi we-EU, eyona nto uya kuyifumana yi-1: 30 xa uthengisa izibini eziphambili ze-forex, kwaye ngaphantsi kwezinye ii-asethi. Oko kuthethiweyo, ngaphandle kwalo mgaqo kukuba abathengi abaqeqeshiweyo baya kunikwa imida ephezulu kakhulu kunemvume yeeakhawunti zokuthengisa ezisemgangathweni. Kuya kufuneka, nangona kunjalo, unikeze i-FBS ngamaxwebhu athile ukubonisa ukuba uwela phakathi kolu didi.
Iidiphozithi ze-FBS kunye nokurhoxa
Xa kufikwa ekongezeni imali kwi-akhawunti yakho ye-FBS, uya kuba nenani leendlela zokuhlawula ezifanelekileyo ongakhetha kuzo.
Eyona ndlela ilula yokuxhasa iakhawunti yakho kukubambisa okanye ngekhadi letyala, hayi kancinci kuba intengiselwano iya kuqwalaselwa ngoko nangoko kwaye ngaphandle komrhumo.
Ngokumalunga nokutsalwa kwemali, kuya kufuneka ukuba ukhuphe imali ubuncinci idipozithi yakho yoqobo ubuyele kwindlela yokuhlawula efanayo. Oku kukuqinisekisa ukuba i-FBS iyahambelana nemigaqo echasene nokuthutyeleziswa kwemali. Nangona iindlela ezininzi zediphozithi zingabizi mali, konke ukutsalwa kwemali kuza nentlawulo. Oku kuya kuxhomekeka kwindlela yokuhlawula orhola kuyo imali.
Ngokomzekelo, ukuhoxiswa kwe-debit / credit card kuya kubiza i-$ 1, ngelixa i-Neteller itsala umrhumo we-2%. Kwicala le-flip, i-FBS isebenze kakhulu xa kuziwa ekuqhubeni ukurhoxiswa. Enyanisweni, kwiimeko ezininzi, izicelo zokuhoxiswa zicutshungulwa ngaphakathi kwe-15-20 imizuzu - kungakhathaliseki indlela yokuhlawula esetyenziswayo.
FBS Ubuncinane bediphozithi
Ubuncinci bediphozithi kwi-FBS ixhomekeke kuhlobo lweakhawunti oyivulayo. Ngaloo nto, zombini i-akhawunti ye-Cent kunye ne-Crypto ifuna idiphozithi encinci ye-1 yeedola. Imfuno ephezulu yediphozithi yokuqala iza ne-akhawunti ye-ECN kwi-1,000 yeedola.
Olunye uphawu olubalaseleyo lwe FBS kukuba iqonga lokurhweba linikeza uluhlu lweebhonasi. Okona kubaluleke kakhulu, umthengisi ubonelela nge-100% yebhonasi yediphozithi ehambelanayo kubo bonke abathengi ababhalisa okokuqala.
Kwakhona uya kufumana iibhonasi ezinikezelwa kubathengi abakhoyo. Umzekelo, ngexesha lokubhala, FBS inikezela ngentengiso ye-cashback ukuya kuthi ga kwi-15 yeedola kwiqashiso ngalinye xa uthengisa i-forex. Kuya kuba bubulumko ukufunda imigaqo kunye nemiqathango yazo naziphi na iibhonasi ocinga ukuzifaka - ngakumbi ngokumalunga neemfuneko zokubheja.
Imfundo yeFBS, uPhando, kunye neZixhobo zokuRhweba
I-FBS ibonelela ngoluhlu olukhulu lwezixhobo ezijolise kukwenza umrhwebi ongcono nonolwazi ngakumbi.
Oku kubandakanya oku kulandelayo:
Ukuba usaqala kwihlabathi lokuthengisa, i-FBS ibonelela ngesebe lezemfundo elibanzi eligubungela i-forex. Oku kubandakanya incwadi yesikhokelo ye-forex, iingcebiso kubathengisi abatsha, izifundo zevidiyo, kunye noluhlu lwamagama. Sikwathanda iiwebinars eziqhelekileyo kunye neesemina ezinikezelwa ngumthengisi.
I-FBS yomelele xa isiza kuphando kunye nohlalutyo. Umzekelo, umthengisi unikezela ngecandelo leendaba elibandakanya ezinye zezona zihloko zishushu kwi-forex, iimpahla, izitokhwe, kunye nophuhliso loqoqosho.
Iqela elisemva kwe-FBS liya kubonelela ngohlalutyo lwemihla ngemihla olubandakanya ulwazi olunzulu lwezobuchwepheshe kunye nesiseko sedatha. Mhlawumbi eyona nto inomtsalane ngakumbi sisitishi se-Forex TV esinikezelwe kwiwebhusayithi ye-FBS. Oku kugubungela imfumba yeevidiyo ezixhokonxa iingcinga kuluhlu olubanzi lwezihloko zorhwebo.
Abarhwebi bazo zonke izakhono zezakhono bathembele kwizixhobo zokubanceda benze uqikelelo oluchanekileyo lweemarike zemali. Kwi-FBS, uya kufumana yonke into ukusuka kwikhalenda yezoqoqosho ukuya kwii-calculators ze-forex kunye nabaguquleli bemali.
Ngaba i-FBS Broker ikhuselekile?
Eyona metric ibalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele ngaphambi kokuvula iakhawunti kunye nomthengisi we-intanethi kukuba i-capital yakho yokurhweba ikhuselekile na. Kwi-FBS, akufuneki ube nanto yakuzikhathaza ngayo - njengoko i-broker ilawulwa kakhulu.
Oku kuquka iilayisensi ezivela kula maqumrhu emali alandelayo:
Ukongeza kummiselo, kuya kufuneka uqwalasele isidima se-FBS phambi kokuba ubhalise. Okokuqala nokuphambili, umthengisi unikezela ngeenkonzo zokurhweba ukususela ngo-2009. Oku kuthetha ukuba i-FBS inobungqina obuqinisekisiweyo kunye nexesha elide lerekhodi kule ndawo ye-brokerage.
Ukongeza koku, i-FBS ithe yatsala ngaphezulu kwe-17 lezigidi zeeakhawunti zabaxumi kwiqonga layo ukusuka kumazwe angaphezu kwe-150.
Amazwe axhaswa yi-FBS
I-FBS yi-broker yehlabathi esebenza kumazwe amaninzi kwihlabathi jikelele. Oko kuthethiweyo, umrhwebi akanakusetyenziswa ngabahlali kwezi ndawo zilandelayo:
Okona kubalulekileyo, abathengi baseMelika abavumelekanga ukurhweba ngezixhobo zeCFD, yiyo loo nto bengakwazi ukusebenzisa iFBS.
Inkonzo yabaThengi beFBS
Iqela lenkonzo yabathengi kwi-FBS lilinganiswe kakhulu. Eyona ndlela ilula yokuthetha nelungu leqela kukusebenzisa indawo yokuncokola ephilayo. Kwiimeko ezininzi, akuyi kufuneka ukuba ulinde ngaphezu kwemizuzu embalwa ukudibanisa ne-arhente.
Kungenjalo, siyayithanda into yokuba i-FBS ibonelela ngenkonzo yokufowuna. Ngokubonelela ngenombolo yakho yefowuni kunye nexesha olikhethileyo, ummeli we-FBS uya kuzama ukukufowunela ngokuthe ngqo.
Isishwankathelo, uphononongo lwethu lwe-FBS lufumanise ukuba umthengisi okwi-intanethi unazo zonke iziseko ezigqunyiweyo. Ngokuphathelele ukhuseleko, iqonga linikwe ilayisenisi ngamanye awona maqumrhu emali ahloniphekileyo kule ndawo - kuquka i-ASIC kunye ne-CySEC. Unokuqalisa ngediphozithi encinci ye-1 yeedola kwaye uneentlobo ezininzi zeakhawunti onokukhetha kuzo.
Oku kubandakanya zombini ii-akhawunti ezingenakho ikhomishini kunye ne-zero-spread-akhawunti - ke abarhwebi bazo zonke iiseti zezakhono bayagqunywa. Awuyi kuba mfutshane kwii-asethi zokurhweba nokuba, njengoko i-FBS ixhasa yonke into ukusuka kwi-stocks kunye ne-forex ukuya kwi-crypto kunye neemveliso - zonke ziluhlobo lwe-CFDs.
Ngaba i-FBS yi-broker esemthethweni?
Ewe, i-FBS yi-broker esemthethweni enikezela ngeenkonzo zokurhweba ukusukela ngo-2009. Umthengisi unikwe ilayisenisi ngamaqumrhu ahloniphekileyo aliqela - kuquka i-ASIC, i-CySEC, kunye ne-FSCA.
Loluphi uhlobo lomthengisi we-FBS?
I-FBS yi-CFD broker, okuthetha ukuba igxile kwiimveliso zemali ezixhasiweyo. Oku akukuvumeli kuphela ukuba uthengise izitokhwe, i-crypto, i-commodities, kunye ne-forex kumda, kodwa unokukhetha ukuhamba ixesha elide okanye elifutshane kwimarike oyikhethileyo.
Yeyiphi idiphozithi encinci kwi-FBS broker?
Ukuba uvula i-Cent okanye i-Crypto akhawunti kwi-FBS, idiphozithi encinci yi-$ 1 kuphela.
Kuthatha ixesha elingakanani ukurhoxiswa kwe-FBS?
I-FBS iphawula ukuba kwiimeko ezininzi, umthengisi uqhuba izicelo zokurhoxisa kwimizuzu eyi-15-20 nje. Nangona kunjalo, ukuba ungumthengi omtsha okanye imali yokurhoxisa ibalulekile, umthengisi unokufuna ixesha elingakumbi.
Ziziphi izinto ezisasazwa kwi-FBS?
Ukusasazeka kwi-FBS kuya kuxhomekeka kuhlobo lweakhawunti oyivulayo. Ngokomzekelo, ukuba uvula i-akhawunti ye-ECN, ukusasazeka kuqala kwi-1 pip.